Ny soperkaontinanta Gondwana
I Gondwana dia kaontinenta lehibe tamin'ny faran'ny taona Neoprôtezôika (-600 tapitrisa taona) ary nanomboka niparitaka tamin'ny fanombohan'ny taonan Jiorasika (-600 tapitrisa taona). Misy ny Gondwana amin'ny taona Palezoîka (na Protogondwana) ary ny Gondwana tamin'ny taon'ny Mezôzôika. Anelanelan'ireo fotoana ireo. faritry ny soperkaontinanta Pangaia i Gondwana.
Ny tany ankehitriny singan'i Gondwana taloha dia i Afrika, i Amerika antsimo, i Antartika, i India, Aostralia ary i Madagasikara.
Ny anarana Gondwana dia anaram-paritra indinaina. I Eduard Suess no nanome ilay anarana an'ilay kaontinenta taloha.
Toe-tany[hanova | hanova ny fango]
Na dia eo amin'ny misy an'i Antartika ankehitriny aza ny fisian'i Gondwana (any amin'ny farany atsimon'ny Fajiry). Nafana noho ny ankehitriny ny toe-tan'ny Tany, ary nahitana karazam-boninkazo ary karazam-biby isan-karazany tao Gondwana nandritry ny taona Mezôzôika.
Fiforonana[hanova | hanova ny fango]
I Gondwana dia vokatry ny fifandonan'ireo kaontinenta madinidinika ireo :
Azania : Madagasikara amin'ny ankapobeny, ny tandrok'afrika ary singan'i Yemen ary Arabia (anarana avy amin'ny anaran'ny amorontsiraka atsinanan'i Afrika amin'ny fiteny grika)
Kongo-Tanzania-Bangweulu singan'i Afrika afovoany.
India tamin'ny fotoana Neôprôtezôika : ny faritra farany atsinanan'i Madagasikara, i Seisela, ary ny faritra atsinanan'i Antartika.
Kaontinenta aostralianina/kaontinenta Mawson : Singan'i Aostralia atsinana/
Nisy singantany hafa nanampy ny famoronan'i faritra misy an'i Arjantina ankehitriny ary manodidonaa ary singan'i Laurentia tamin'i Hondwana nifandona tamin'i kaontinenta Laurentia tamin'ny taona Ordôvikiana
Prôtôgondwana[hanova | hanova ny fango]
Tamin'i fiparitahan'ny kaontinenta lehibe Rodinia (tamin'ny -750 tapitrisa taona), hita fa misongadina ny Gondwana atsinanana (Atsimon'i Afrika , Antartika atsinanana, Aostralia, India, Madagasikara, Arabia, Ginea Vao, Avaratr'i Sina, Atsimon'i Sina, Indôsina ary dobon'i Tarim) ary i Gondwana andrefana (Amazonia, Rio de Plata, Afrika Andrefana, Florida, Avalonia ary Atsimon'i Eoropa). Nifandona ireo faritr'i Gondwana roa ireo ary niorina ny kirataon'i Kongo.
Nandritry ny taona nanaraka, Ordôvisiana tamin'ny Karbônifera, hiongotra amin'i Gondwana – teo amin'i Tendrontany Atsimo tamin'izany fotoana izany – i Avalonia, zana-kaontinenta iray tamin'ny taona –490 tapitrisa, narahan'ny zanakaontinenta Arimôrikana ary Iberika i Avalonia tamin'ny taona –430 tapitrisa ary nanaraka ny zanakaontinenta sinoa ary indôsinoa tamin'ny taona –400 tapitrisa.
Tamin'ny voalohan'ny taona Karbônifera, nianavaratra i Gondwana ary nidona tamin'ny kaontinanta lehibe Laurussia. Ny tangorombohitra Herkinia no vokatr'io fifandonana io. Ny Appalaches (Etazonia) ary ny tangorombohitra Armôrikana (Frantsa) no anisan'ny dindon'io tangorombohitra lehibe io. Ny kaontinantan'i Gondwana ary i Laurussia mikambana no atao hoe Pangaia.
Nisaraka tamin'ny faran'ny taoan Triasy ny kaontinenta Pangaia ary nisokatra niaraka tamin'iny fisarahana iny ny Ranomasimbe atlantika. Verin'i GOndwana nandritra ilay fisarahana i Florida ary ny tanjon'i Yucatan.
Nandritra ny taoan Palezôika, mafanafana ny toe-tan'i Gondwana, satria nandritry ny taona Mezôzôika, mafana noho ny taona ankehitriny ny toetrandro.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Gondwana&oldid=768622"
Voaova farany tamin'ny 9 Mey 2015 amin'ny 08:47 ity pejy ity.